Posted by မြရွက်ဝေ at 11:25 AM
sis..lat ya kg ei..
me me dilo wan order..!
can i?perhaps the blue blue pajamas style?or the curtain :P
ps:mama..reali..isagood wifey naw..
knows everything from cooking to sewing..how lucky is ur 8thugyi :P
ခန်းဆီး (၁) စုံ၊
ချည်သားပါးပါးလေး အိမ်နေရင်းဝတ် (၁)ထည်၊
ခေါင်းအုံးစွပ် (၁) စုံ၊ ခေါင်းအုံးက အခု (၁)လုံးပဲရှိတာ။ ကိုဇနိလာရင် (၁)လုံးတိုးရအောင်လို့။ ဟဲ ဟဲ စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်တာပါ။
မြန်မြန်လေးလဲ ချုပ်ပေးနော်။ :P
မဇနိက ရင်ဖုံးလည်း ချုပ်တတ်တယ်။ :P
တို့အတွက် ၁ထည် ဂါဝန်လေး လေ.. အခု အိုက်တော့ အတော်ပဲ
အစ်မရေ ကျုပ်ကို ကပ္ပိယ ၀တ်စုံလေးတစ်စုံလောက်ဗျာ အခုဟာက ညစ်နေပြီဗျ ။ ဆွမ်းခံထွက်ရင် ရှက်စရာကြီး ။ အဟေးဟေး မပြင်မဆင် ရယ်ဒီ ၀တ်လို့ရအောင်ပြောတာနော ။ ပိတ်စဖိုးလည်း အစ်မပဲစိုက်ဗျာ ။ လက်ခကတော့ ရွာဦးကျောင်း အလှူရှိရင် အစ်မတို့အတွက် သာဓုပိုခေါ်ပေးမယ် ။ အဟေးဟေး
ကျွန်တော့်ဖို့ သုံးရာသီလုံး ဝတ်လို့ရတဲ့ တစ်စုံတည်းသော ဝတ်စုံချုပ်ပေးပါ
ပြီးရင် ကိုယ်စားလှယ်ယူပြီး ပြန်ဖြန့်မလို့
ညီမလေးချူပ်ထားတဲ.အကျီတွေ ကြည်.ပြီးတော.ထုံးစံအတိုင်းပေါက်တတ်ကရတွေ တွေးတော.တာပေါ.
ဗိုက်ကလေးပူမှ ဝတ်လို.ရမယ် ဆိုတာရယ်။
ထမင်းစားပွဲ လုပ်တာ ဖင်ထိုင်ခုံလေးဖြစ်သွားတယ် ဆိုတဲ.လက်သမားဆရာရယ်။
မင်းလူဝတ်ထုထဲ ကလှထုံလို ပုဆိုး သွားချူပ်တာ အတိုင်းမပါသွားလို.ပြန်လာတယ် ဆိုတာရယ်။
မောင်ကောင်းထက်ဝထုတဲက အပ်ချူပ်ဆရာတွေရယ်။ လာချူပ်သူကို ဘာချူပ်ချင်တာလဲ ကျွန်တော်တို.ဆိုင်က လူတွေ အားလုံးအကောင်းဆုံးချူပ်တတ်ပါတယ်။ လာအပ်သူက ဆရာနဲ.မှ ချုပိချင်တာဆိုတော။ ဟာ အစ အကောင်းစားကြီး ပုဆိုးချူပ်မလို.လား ကျွန်တော်က ပုဆိုးဘဲ ချူပ်တတ်တာ ဆိုတု.ရယ်စရာတွေ. အစုံပေါ.။
ညီမလက်ရာလေးကောင်းတယ်။အစ်မ ကတော.ထုူံ့းစံအတိုင်း အိမ်ထောင်မှူနိုင်တယ်ဆိုတော. စကဒ်က အနားပြေသွားလို.ပြန်ချူပ်တာတောင်ချူပ်ရာတွေ ပေါ်ါနေလို.။ အဟက်။
အီးစက်ချုပ်လက်ခံသည်ဆိုတော့ ကျနော်လည်း အပ်ချင်တယ့်  ipod အတွက်လဲ အင်္ကျီတစ်ထည် ကျနော်လည်း လိုချင်လိုက်တာ ခဏခဏ ပြုတ်ကျနေလို့း)
အင်္ကျီလေးတွေ ချုပ်ထားတာ လှတယ်ညီမလေးရေ.. အမ ၁၀ တန်းအောင်တုန်းက ချုပ်လိုက်သေးတယ်.. သူများကို ချုပ်ပေးတာ ပြန်လျော်ပေးရတာနဲ့ မကာလို့ အမေက သမီးရယ် နင်သူများအပ်ထည်တွေ လက်ခံပြီး မချုပ်ပါနဲ့တော့တဲ့.. လျော်ရတာများလွန်းလို့ပါလို့ တားယူရတဲ့အထိပဲ.. အဟီးး ခဏခဏ မှားညှပ်မိလို့လေ.. အဲဒါပိုက်ဆံယူပြီး ချုပ်ပေးတာ မဟုတ်ဘူး အလကားချုပ်ပေးပြီး ကိုယ်က ပြန်ပြန်လျော်ပေးရတာ.. အဲဒီလောက်အထိတော်တာ.. အခုတော့ အကုန်မေ့ကုန်ပါပြီ။ အိမ်နေရင်း အင်္ကျီလေးတွေတော့ အပ်ချင်သား။ အိမ်နားနီးရင်ကောင်းမယ်နော်.. :)
ညီမDilo---> အိမ်ရှင်မပီသလာလား မလာလားတော့ မပြောတတ်ဘူး။ သယ်ရင်းတွေ တစ်ယောက်မှက အမဒီလို ချက်ပြုတ်နေတာ ဘယ်သူမှ ယုံကြဘူးဂျ။ ဘယ်ယုံမှာလဲ ကိုယ်လဲသူတို့နဲ့နေတုန်း ခေါက်ဆွဲပြုတ်ဘဲ စားနေတာ များတာကိုး။ :D
မဇနိ--->အော်ဒါတွေအများကြီးပါလား! မမနိကမှ ပိုတောင်ချုပ်တတ်သေးတယ်။ ကိုနိက လဲ မနိလက်ရာမှ ဝတ်ချင်မှာ မြေကြီးလက်ပုတ်မလွဲပဲ သေချာတယ်ဗျို့။
မမြတ်နိုး---> ကိုယ်တိုင်းပြောဦးလေ။ မော်ဒယ်တွေရဲ့ အတိုင်းနဲ့ အတူတူဘဲထင်တယ်။
ကိုရင်ညိမ်း---> ကပ္ပိယ ၀တ်စုံအတွက် ချည်ဖြူစ ရှာမရလို့ လိုက်ကာစနဲ့ ချုပ်ပေးလိုက်မယ်နော်။:D
မခင်ဦးမေ---> မမက အိမ်ထောင်မှု နိုင်မနိုင်တော့ သေချာမသိဘူး မမရဲ့ KMSL ကိုနိုင်တာတော့ သေချာတယ်။ အဲဒါနဲ့တင် အရမ်းတော်နေပြီ။ :D
မောင်မျိုး---> ipodကိုယ်တိုင်းပြောလေ။ ပိန်လား ဝလား?
မnu-san---> ညီမလို စည်းကမ်းချက်တွေ ထုတ်ထားလိုက်ပေါ့။ မဟုတ်ရင် ချုပ်လဲချုပ် လျော်လဲလျော်ဆိုတော့ မကိုက်ပါဘူး။ တိုကျိုလာလည်ရင် ဝင်လည်လေ။ အဲဒီအခါကျ ချုပ်ပေးမယ်။
မီလဲ လာအပ်မှပဲ .. :-)
မီဆို ခန်းဆီးတောင် မချုပ်တတ်သေးဘူး .. ။